Tababare Klopp oo ka hadlay dareenkiisa guushii Nafle caariga ahayd ay ka gaareen kooxda Brighton – Gool FM
Tababare Klopp oo ka hadlay dareenkiisa guushii Nafle caariga ahayd ay ka gaareen kooxda Brighton
(Premier League) 12 Jan 2019. Macalinka reer Germany ee kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii 1-0 ahayd ay kaga gaareen kooxda Brighton, kulankooda 22-aad ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkan.
Goolka kaliya ee kooxda Liverpool ay guusha ku gaartay ayaa waxay kaga mahad celinayaan laacibkooda reer Masar ee Mohamed Salah, wuxuuna ahaa gool rigoore ah.
Kadib kulanka marka uu soo idlaaday ayuu tababare Klopp la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Waxaan ahayn kuwo aad u dagan kulankii aan maanta la ciyaarnay kooxda Brighton, inkastoo uu dib u dhac nagu yimid, waxaan u sheegay ciyaartoyda inaan u baahanahay inaan is dajino si aan u xakameyno xaalada”.
“Kooxdeyda ma aysan sameynin qaladaad, tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha ay koox kasta ku adkaan karto inay gaarto, balse xidigaha Liverpool waxay ku guuleysteen inay sidaas sameeyaan”.
“Qeybta labaad, kadib marka aan dhalinay rigoorada, waxaan si buuxda u xakameynay xaalada, kadibna waxaan abuuray fursado aan ku dhalin karno, halis la’aan”.
Si kastaba Liverpool ayaa si ku meel gaar ah u gaarsiisay farqiga u dhexeeya iyada iyo Manchester City ilaa iyo 7 dhibcood, waxaana la ogaan doonaa natiijada kasoo baxda kulanka Skay Blues la ciyaari doonto habeenka Isniinta ee soo socota kooxda Wolverhampton.
Tottenham oo ku Wargalisay Real Madrid Qiimaha Dhaliyahooda Hary Kane…Waa Imisa ?
Chelsea oo guul Dirqi ah ka gaartay Newcastle…+SAWIRRO